arlaadi August 1, 2016 No Comments
(Villa Somalia). Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliye, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay ciyaartooyda xulka Qaranka Soomaaliyeed oo ka qeyb-galeysa tartanka Olimbikada adduunka ee RIO 2016 oo lagu qaban doono dalka Brazil.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiira-geliyey islamarkaana guddoonsiiyey Calanka Soomaaliya ciyaariyahanada Maxamed Daa’uud Maxamed iyo Maryam Nuux Muuse oo ka qeyb galaya tartarnka RIO 2016 gaar ahaan ciyaaraha fudud.
“ Mar ka hore waxaa guul inoo ah oo muhiimadeeduna leh inaad maanta ka qeyb galeyno tartankaas, waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaad guul ka soo hoyin doontaan ciyaaraha Olimbikada adduunka ee RIO 2016 gaar ahaan kuwa fudud oo aad ka qeyb galeysaan. Dowladda Soomaaliya diyaar ayay la tahay wax walba oo idiin fududeynaya inaad ku guuleysataan tartarnka, sidoo kale xirriirka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed garabkiina ayey taagan yihiin” ayuu yiri Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa u rajeeyey ciyariyahanadaan oo maalinta berrito ah u ambabaxi doona dalka Brazil inay guul ka soo hooyin doonaan tartarnka , wuxuuna madaxweynaha DFS u ballan-qaaday in dib u soo laabashadooda loo sameyn doono soo dhaweyn ballaaran.